Vondron'orinasa Slava Potato - Gazety Potato System
Ny orinasam-pambolena Slava Potato dia niseho teo amin'ny tsena rosiana tamin'ny taona 2001, taorian'ny fiakaran'ny fambolena amin'ny ankapobeny, ary indrindra ny indostrian'ny mpamboly ovy.
Ny fiompiana dia naorina tao amin'ny tanànan'i Komsomolskoye, distrikan'i Komsomolsky ao amin'ny Repoblika Chuvash. Nanomboka tamin'ny tany 35 hekitara ny asa. Ny hetsiky ny orinasa dia ny fambolena ovy sy legioma. Tao anatin'ny fotoana fohy dia nahitam-bokany ny agrofirm: efa tamin'ny taona 2008 no nahazoany ny anaram-boninahitra "Orinasa mpamokatra ovy tsara indrindra ao amin'ny Repoblika Chuvash".
Tamin'ny taona 2009, ny orinasa dia nitombo ho vondrona orinasa, izay, ankoatry ny birao foibe, dia nahitana koa ny Komsomolskie Vegetables Agrofirm, ny Slava Potato-Yalchiki Agrofirm ary ny Slava Potato-Kanash Agrofirm. Ny sehatry ny orinasa dia hita tany amin'ny distrika telo tao Chuvashia indray mandeha: Komsomolsk, Yalchik ary Kanash. Nahatratra 5300 hektara ny velarantany azo volena.
Ny serealy (zavamaniry lohataona sy ririnina) ary zezika maitso dia nampiana ho an'ny lisitry ny vokatra nambolena, fa ny tena mampiavaka ny vondron'orinasa dia ny famokarana ovy voa.
Manokana - famokarana masomboly
Tamin'ny famokarana masomboly reproductive fotsiny no nataonay. Avy eo ny traikefa sy fahalalana azo dia nahafahana namoaka làlana ho an'ny famokarana ovy voa tany am-boalohany, nanjary profil iray ho an'ny Agrofirm "Slava Potato - Yalchiki".
Tamin'ny taona 2015, ireo manam-pahaizana momba ny fiompiana dia nividy sy namboly microplants ovy sy minitubers tao amin'ny tranoona tonelina. Ny valin'ny fandalinana ny laboratoara dia nampiseho fa nahomby ny fanandramana: ny fitaovana voa azo dia nahafeno ny fepetra takiana.
Roa taona taty aoriana, ny volana desambra 2017, nanokatra laboratoara mikropropagasiy maoderina manana microplants mahatratra hatramin'ny 100 XNUMX isan-taona ny orinasa ary nanamboatra trano fitobiana, izay mitazona hatrany ny fepetra mety indrindra hahazoana ny akora voa misy kalitao milamina.
Androany ny vondron'orinasa Slava Potato dia iray amin'ireo mpitarika any amin'ny faritra amin'ny resaka fambolena ovy. Ny orinasa dia nanangana tsingerina famokarana iray manontolo: Agrofirm "Slava Potato-Yalchiki" dia miasa tsara mba hahazoana ny akora voa tany am-boalohany sy ny tany am-boalohany (microplants, minitubers, 1 seedener, super-super-elite), ovy masomboly elit (superelite, elite ); Agrofirm "Slava Potato" dia manohy mampivelatra ny famokarana ovy voa. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 250 hektara no omena ho an'ny voa maniry.
Isan-taona dia misy karazana ovy vaovao 30 eo ho eo andrana amin'ny sehatry ny fitsapana ny orinasa. Ny zava-bita amin'ny fiompiana dia voasedra amin'ny fanoherana ireo viriosy, vokatra ary kalitaon'ny varotra. Ny karazany tsara indrindra, izay nanamafy ny tombotsoany nandritra ny vanim-potoana maromaro nisesy, dia ampidirina amin'ny famokarana. Ny orinasa dia manisy fiheverana ireo karazany avy any ivelany (Riviera, Red Scarlett, sns.) Ary ireo karazana Rosiana (Gulliver, Meteor, ary amin'ny vanim-potoana vaovao koa Krasa Meshchera, Flame).
Ny fitaovana masomboly azo any amin'ny toeram-pambolen'ny Slava Potato Group of Companies dia amidy manerana an'i Russia, ary koa amin'ireo firenena mifanila aminy. Ireo manampahaizana manokana momba ny vondron'orinasa dia manome serivisy fikaonan-doha avo lenta momba ny safidin'ny karazany ary mizara ny zavatra niainany tamin'ny fambolena ovy ambioka amin'ny mpanjifa.
Ovy sy legioma ambony latabatra Nandritra izay 15 taona izay, ny Slava Potato Group dia iray amin'ireo mpamokatra ovy sy legioma lehibe indrindra any amin'ny faritra Volga afovoany. Fizarana telo amin'ny orinasa no mandray anjara amin'ny fampandrosoana ity lalana ity: ny orin'asa - Agrofirm "Slava Potato" (ovy maniry), Agrofirm "Potava Slava - Kanash" (ovy maniry) ary Agrofirm "legioma Komsomolskie" (legioma sy legioma maniry amin'ny tany malalaka). Raha atotaly dia mamboly 500 hektara ho an'ny ovy latabatra ny tanimboly, 50 hekitara ho an'ny legioma.
Ny fizarazarana dia misaraka amin'ny faritany, ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny masininy farany amin'ny milina fambolena farany, fitaovana hanasokajiana sy hitahiry ovy. Ny fisian'ireo fotodrafitrasa maoderina fitehirizana (miaraka amina 25 taonina totalina) miaraka amina rafitra microclimate mandeha ho azy sy ny fitaovana fampangatsiahana dia mamela ny vondron'orinasa hamatsy mpanjifa vokatra avo lenta mandritra ny taona kalandrie iray manontolo.
Tags: "Voninahitra ho an'ny ovy"ambioka ambioka sy ovy mitomboRepoblika Chuvashia
Tamin'ny 9 Jolay 2021, dia natao tao amin'ny distrikan'i Komsomolsk ao amin'ny Repoblika Chuvash ny Andron'ny saha ovy, natokana ho an'ny faha-20 taonan'ny vondrona orinasa Slava Potato. Tantara...
4 miliara rubles no hividianana tetik'asa ovy any amin'ny faritra Astrakhan
Mitombo ny volan'ny fambolena amin'ny fiompiana bibikely ho an'ny zaridaina